Kala carar baahsan oo saakay ka jiro wadada Makka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kala carar baahsan oo saakay ka jiro wadada Makka Al-mukarama ee magaalada Muqdisho
Waxaa gebi ahaan maanta la xiray waddada Maka Al-mukarrama, gaar ahaan inta u dhaxeeysa Isgoysyada shaqaalaha iyo Taleex ee magaalada Muqdisho, kadib markii halkaasi lasoo dhigay gaari looga shakiyay inay saaran yihiin walxaha qarxa.
Hay’addaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay in gaarigaas halkaasi lasoo dhigay muddo labo maalmood kahor, waxaana haatan goobahaasi ku sugan ciidanka NISA oo baaritaano ku haaya.
Gaadiidka hore u isticmaali jiray waddooyinkaasi ayaa lagu amrayaa inay ka dheeraadaan isticmaalka waddada Makka Al-mukarama inta uu howlgalka baaritaanka ah socdo.
Dhinaca kale, waxaa wadada Makka Al-mukarama maanta lagu arkayaa ciidamo ka kala tirsan nabad sugidda io booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo dadka iyo gaadiidka u diidaya inay wadadaasi isticmaalaan.
Dadka shacabka ayaa lagu wargeliyay inay ka dheeraadaan istimcaalka wadadaasi inta uu howlgalka socdo.
Inta badan qaraxyadda ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa loo adeegsadaa gaadiidka lagu soo xiro walxaha qarxa oo lasoo dhigo meelaha ay dadka shacabka ah ku badan yihiin, waxaana qaraxyaddaasi inta badan waxyeelo kasoo gaartaa dadkaasi iyo mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya.